2018-03-09 – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၇။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၈ ရက် ( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက် ) နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူကိုဗဟိုပြု၍...
2018-06-07 – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၅။) ၁၃၈၀ ပြည်နှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၉ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊...
2018-06-13 – လုပ်ငန်းခွင်သုံး ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေ
လုပ်ငန်းခွင်သုံး ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၇။) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်...
2018-06-25 – သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ
သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၂ ။) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို သိပ္ပံ၊...
2018-06-21 – မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈ ။) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေကို...
2018-05-21 – ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၂ ။) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၇ ရက် ) (၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁)...
2018-04-05 – အမျိုးဇာတ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှ ဖယ်ရှားသည့် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း
အမျိုးဇာတ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှ ဖယ်ရှားသည့် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း အမျိုးဇာတ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှဖယ်ရှားသည့် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁၁။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၅ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်)...
2018-02-14 – မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆ ။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2016-01-07 – ရာဇသတ်ကြီးကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ရာဇသတ်ကြီးကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၆။) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။...
2016-01-29 – နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေ
နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၅ ။) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်...
2017-03-24 – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၇ ။) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အပိုင်း ၁ အမည်နှင့်စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ရက်...
2016-12-30 – သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေ
သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၄ ။) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-08-31 – ဆည်မြောင်းဥပဒေ
ဆည်မြောင်းဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၇။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို ဆည်မြောင်းဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။...
2017-07-11 – ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၃ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-07-11 – ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များပျက်ကွက်မှုအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များပျက်ကွက်မှုအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၂။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၃ ရက် (၂၀၁၇ ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-07-17 – ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက် (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-07-17 – မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၄။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက် (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။...
2017-07-17 – ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၅။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက် (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-08-15 – မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၄။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၈ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-08-15 – အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၃။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၈ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-08-08 – တာတမံဥပဒေ
တာတမံဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၂။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို တာတမံဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။...
2017-07-31 – အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုတတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုတတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက် (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-08-01 – မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇)
မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇) (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၉ ။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၇ ခုနစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-07-21 – တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ
တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2017-08-01 – ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၀ ။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၉ ရက် (၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်များ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2016-10-18 – Myanmar Investment Law (draft)
Myanmar Investment Law (Draft) (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 40/2016) The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E. (18, October, 2016) The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law. Chapter ITitle and Definition 1This Law shall be called the Myanmar Investment Law....
2017-02-08 – ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း
ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁။) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။...
2017-03-01 – ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃။) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၄ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊...